maxaan ka galabsadey (( miyuu igu kalsoonaanwaayey)) | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
maxaan ka galabsadey (( miyuu igu kalsoonaanwaayey))
waa sheeko ku dhacdey gabadh somaliyeed oona dhab ah ayada ayaa ka hadleyso dhibka ku dhacay
ma sidaan baa jaceylku ?
magaceeyka waa ilhaan waxaana ku noolahay wadanka mareekanka (usa) waxaan mudo isla soconey wiil oo naga dhexeeyey jaceyl weyn nasiib daro magaalada aan ku noolahay waa magaalo fursadaha shaqo ee ku yar tahay.
asigoo shaqadoo ka shaqeenaayey laga soo diray oo waa dhamaatay ayaa ladhahay .
danta waxa ay ku qasabtay in uu shaqo kale raadiyo balse nasiib daro waa uu waayay mudo markoo shaqo la,aan ahaaa yuu door biday inuu iskaaka dago magaaladan aan ku noolahay inkastoo ee aad inoo dhibeesay kala fogaanshaha labadeen hadana waxaan ka badin weenay in uu aado magaalooyinka fursadaha shaqo ay ku badanyihiin.
hadaba waxaan go,aansaday in aan u diro magaalo shaqo badan oo ay ku nooshahay gabar aan saaxiibo isku dheer aanahay.
waxaana usoo bandhigay ka waran hadii aan kuu diro magaldaas ayaa shaqo badan waxaana joogto gabar saaxiibteey ah iyada ayaa kugu soo dhaween doonto .
Aad ayuu uku farxay wuuna iga aqbalay safarkiisa ayuu xirxirtay.
markuu aaday magaladii nasiib wanaag shaqadii wuu helay waxaana kuwada xariiri jirnay qadka taleefoonka mudo markaan kuwada xariiri jirnay ayaan waxaan ka dareemay dib ukurasho oo ah in uusan ii heen xiisihii hore markaan waco ma ika qabanaayo ama waxa uu iska dhigaa mashquul.
markaan bixin waaye micnihiisa iyo sida uu wax uwado waxaan ka wareestay saaxiibteeyda waxa ayna iisheegtay in uu iga caro kadistay uu lahaayo gabdho kale aniga neh waan ka calool koostay .
hadii aan ogaan lahaa cida uu la heesto waxbeey ii ahaan leheed .
mudo kadib ayaa waxa dhacday gabdho iyo wiilal asaxaabteeyda ah in ay idhahan naraac isbuucaan maalmaha fasaxa oo eey iiwadaan aroos ka jiro magaalada aan ku waayay wiilki aan jeclaa.
waanka diiday lakiin weey iku adkeeyeen waana soo raacay markii aan imaaday arooska .
meeshii arooka oo laka wado baraanbur kadib ayaan bilaawnay baashaal marka lagaaray soo kalitaanka masraxa arooska iyo aroosata ayaa dadki dhamaa sacbis iyo soo dhaweyn labilaabay .
markii aan arkay arooska ayaan qaracmay markii aan argay aroosta waan rumeesan waaye in aan ku jiro riyo iyo run aniga dhan waan isku dhax yaacay waan wareeray waxaa iqabtay wiil ka mid wiilashi aan isi soo raacnay waxa uu idhahay maxaa kugu dhacay waxba ayaan dhahay madaxa ayaa leeyga hayaa marka banaanka ayaan aadaayaa waxa uu yiri isug wax yar inta ay ka fariistaan arooska iyo aroosata waan israaceenaayee .
arooskii ayaa i arkay mar alaala iyo markeey fariisteen waxa uu iisoo diray mid ka midah malxiisyadi waxa uuna iyiri arooska ayaa kuu baahan in uu kula kulmo marka ciyaarta inaa ii imaato ayuu rabaa.
waan u imaaday ciyaarti marki aan umaaday anagoo ciyaaren ayaan waxaan weeydiiye yaa sidaan ii galay adiga mase saaxiibateeyda?
waxa uuna iiku jawaabay calafka waaye
isla su,aasha ayaan hada weey diiyay saaxiibateeyda waxaana dhahay yaa sidaan iigalay wiilkaan jeclaayaa mise saaxiibateey?
waxa aay iiku jawaabtay adaa dayacay jaceelka
Dhibka uu leeyahay guurka naagaha waaweyn ee loo guursado aduunyo darteeda — Guurku Mashruuc Miyuu Noqday Miyaanu Guurku Aheyn Hoy Lagu Nagaado